Nanendry Ambasadaoro vaovao any Madagasikara ny Repoblika Arabon’ny Egypta – Gasy Egypte
Nahazo ambasadaoro vaovao ny Masoivohon’ny Egypta any Madagasikara, ka natao omaly ny fanolorana ny kopian’ny taratasy manendry ny ambasadaoron’ny Repoblika Arabon’i Egypta hiasa sy honina any Madagasikara.
Nandray ny kopian’ny taratasy manendry ny ambasadaoron’i Egypta vaovao, Usama Saeed Mahmoud Khalil, tetsy Anosy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Oliva, tamin’ny faha 22 septambra 2020.
Nivoitra tamin’ny fihaonana teo amin’izy ireo ny nanaovana jery todika ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta. Anisan’izany ny fifanakalozana ara-barotra, ny kolontsaina sy ny lafiny ara-tsiantifika. Voaresaka koa ny tombontsoa iraisana eo anivon’ireo fikambanam-paritra, toy ny Comesa, ny Frankofonia, ny eo anivon’ny Vondrona Afrikanina (UA).
Tsiahivina fa efa nanolotra fitaovam-pitsaboana ho fiaraha-mientana amin’ny governemanta Malagasy, iadiana amin’ny fihanaky ny Covid-19 ny fitondrana Egypsianina ny 6 septambra lasa teo.
Source: MAE Madagascar
Ireo vahiny Tonga, Politique, Vaovao